टाउको नभएको बच्चाको जन्मिने वित्तिकै मृत्यु » खबरहरुको एउटै केन्द्र
शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०५:४० मा प्रकाशित !
११ चैत,बैतडी। बैतडीको दुर्गम तल्लोस्वराडकी एक महिलाले टाउको नभएको अनौठो बच्चा जन्माएकी छन । मेलौली–६ महारुद्रकी २८ वर्षीया सुनिता पोखरेलले केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बिहिबार विहान सो बच्चा जन्माएको स्टाफ नर्स जानकी महतोले जानकारी दिए ।
जन्मिएको बच्चा छोरी रहेको छ, स्टाफ नर्स महतोले भने, “आठ महिनामै सुनिताले जन्माएको बच्चाको टाउको नभएको र जन्मिने बित्तिकै बच्चाको मृत्यु भएको छ ।”
सुनिताको बच्चाको जन्म भने सामान्यरुपमा नै भएको तर बच्चाको जन्म भइसकेपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । बच्चा जन्माउन स्वास्थ्य संस्थामा आएको भएपनि सुनिताको कोही पनि नआएका स्टार्फ नर्स महतोले बताए।
उनले भने, “घरपरिवार तथा आफन्त कोही नआउँदा रिफर गर्न पनि गाह्रो भएको थियो ।” सुनिताको भने अत्यधिक रक्तस्राव भएकाले बिहीबार बैतडीमा उपचार हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा रिफर गरिएको छ ।
पोखरेलको चार महिना हुँदा गर्भ जाँच गराउँदाखेरी नै बच्चाको टाउको नभएको भनेर भने पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बाहिर जान नसकेको बताएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर तथा अन्धविश्वासका कारण समयमै अस्पताल नजाँदा यस्तो अवस्था आएको स्थानीयवासी अर्जुन कुँवरले बताए ।
उनले भने, “स्वास्थ्यकर्मीले बच्चाको टाउको नभएको जानकारी दिएपनि धामीझाँक्रीको भरमा परेर अस्पताल नगएका हुन ।” सुनिताका श्रीमान करन पोखरेल रोजगारीको सिलसिलामा भारत रहेको छ । सुनिताले यसपटक दोस्रो बच्चाका रुपमा जन्म दिएकी हुन ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीले चार महिनाअगाडि भिडियो एक्स–रे गर्दा नै टाउको नभएको भन्ने थाहा भएको र उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्था नआएको बताए ।
“गर्भ रहेको चार महिनाभित्र गर्भवती महिलाले कुनै पनि किसिमको औषधि सेवन गर्नु हँुदैन”, उनले भने, “केही औषधि सेवन गरेको हुनसक्छ ।” औषधि सेवन गरेर बच्चाको शरीरको मात्रै विकास भएको र टाउकाको नभएको हुनसक्ने भएपनि यो अहिलेसम्म पुष्टि नभएको उनले बताए ।
बैतडीमा उपचार हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरा रिफर गरिएकी सुनिताको डडेल्धुरामा पनि रगत नपाउँदा उपचारमा समस्या भएको डाक्टर नवराज जोशीले जानकारी दिए ।
PREVIOUS POST Previous post: जीप दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु
NEXT POST Next post: सेक्स रोबोटको प्रदर्शनी लण्डनमा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०५:४०
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०५:४०
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०५:४०
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०५:४०
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र ११, २०७३ ०५:४०